နိုဝင်ဘာလတွင် ကျင်းပမည့် ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲစာရင်း မှန်ကန်စွာ ထွက်ပေါ်ရေး အခြေခံ အ?? - Yangon Media Group
နိုဝင်ဘာလအတွင်းကျင်းပမည့် ကြား ဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲစာရင်းမှန်ကန်စွာ ထွက်ပေါ်ရေးသည် အခြေခံအကျဆုံး လိုအပ်ချက်ဖြစ်ကြောင်း မင်္ဂလာတောင်ညွန့်မြို့နယ် တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှဌေးက သုံးသပ်ပြောကြားသည်။ ”အဓိကကတော့ လွတ်လပ်ပြီး တရားမျှတမှုရှိဖို့ဆိုရင် ပွင့်လင်းမြင်သာရမယ်။
မဲစာရင်းကို မှန်ကန်အောင်ပြုစုဖို့လဲလိုအပ်တယ်။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ပြဿနာအဖြစ်ဆုံးကတော့ မဲစာရင်းလိမ်လည်မှုပြဿနာတွေ တောက် လျှောက်ဖြစ်လာခဲ့တာ။ ဒါကြောင့် အခြေခံအကျဆုံးက မဲစာရင်း မှန်မှန်ကန်ကန်ထွက်ဖို့က အခြေခံအကျဆုံးပါပဲ။ မဲစာရင်းပေါ်မူတည်ပြီး ရွေးကောက်ပွဲကာလ၊ စည်းရုံးရေးကာလမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်ဆိုပေမယ့် ဘောင်ထဲကနေပြောတဲ့စကားတွေနဲ့ ဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်။ နောက် မဲပေးတဲ့နေ့တွေမှာလဲ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ လုပ်သင့်တယ်။ နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ဥပဒေမဲ့ပြောတဲ့ကိစ္စတွေ ရှိတယ်။ ဥပဒေမဲ့ ပြောလာခဲ့ရင်လဲ တရားဥပဒေဘောင်အတိုင်း တားဆီးဖို့လဲလိုတယ်။ ဒါတွေကလဲ ပြဿနာ ဖြစ်နိုင်တဲ့ အကြောင်းတရားတွေပါ”ဟု မင်္ဂလာ တောင်ညွန့်မဲဆန္ဒနယ်မှ တိုင်းဒေသကြီးလွှတ် တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးလှဌေးက ပြောသည်။
NLD အစိုးရလက်ထက်အတွင်း ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်၌ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲကို ပထမအကြိမ် ကျင်းပခဲ့ပြီး ယခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၃ရက်တွင် လစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ် ၁၃ နေရာအတွက် ဒုတိယအကြိမ် ကျင်းပမည်ဟု ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ကြေညာထားသည်။ အဆိုပါလစ်လပ်မဲဆန္ဒနယ် ၁၃နေရာ အတွက် မဲစာရင်းကောက်ယူရာတွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရှိ မဲဆန္ဒနယ်မြေအချို့ ပါဝင် ခြင်းကြောင့် အခက်အခဲတချို့ ရှိနိုင်ကြောင်း ထောက်ပြပြောဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ ”ကျွန်တော်သိရသလောက်တော့ တာ မွေမြို့နယ်မှာလဲ လုပ်နေပါပြီ။ သူတို့မြို့နယ် အင်အားတင်မကဘူး။ တခြားမြို့နယ်က အင်အားတွေကိုပါယူပြီး လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်နေတာ ရှိတယ်။ အခုက ဧည့်စာရင်းမရှိတော့ဘူး။
မဲစာရင်း ကောက်ယူနေတဲ့သူတွေကလည်း ၇ လွှာတို့ ၈လွှာတို့ တက်ရတဲ့အခါမှာ ပြဿနာရှိတယ်။ အဲဒီလောက်ကို စေ့စေ့စပ်စပ်လုပ် နိုင်ပါ့မလားဆိုတာ စိုးရိမ်ပါတယ်။ လက်ရှိ ကောက်နေတဲ့ အနေအထားမှာလဲ ကျွန်တော် တွေ့ရသလောက် အဲဒီလောက်မလုပ်နိုင်သေးဘူး။ အဲဒီလိုမျိုးတော့ အသေးစိတ်လုပ်ဖို့ လို အပ်တယ်။ ဒါတွေကလဲ တာဝန်ပေးတဲ့အခါမှာ ကော်မရှင်ကိုပဲမဟုတ်ဘဲ ပြည်သူတွေကပါ ပူးပေါင်းပါဝင်နိုင်မှသာ မဲစာရင်းက စနစ်တကျ နဲ့ စေ့စေ့စပ်စပ်တော့ရမှာပါ”ဟု ဦးလှဌေးက ဆက်ပြောသည်။ ပြည်တွင်း၌ ၂ဝ၁ဝ ပြည့်နှစ်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲမှလွဲ၍ ယင်းနောက်ပိုင်းကာလများတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ရွေးကောက်ပွဲများသည် အခက်အခဲ မရှိခဲ့ ကြောင်းနှင့် လာမည့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ တွင်လည်း အခက်အခဲမရှိနိုင်ကြောင်း NLD ဗဟိုပြန်ကြားရေးကော်မတီ၏ အတွင်းရေးမှူး မုံရွာအောင်ရှင်က သုံးသပ်ပြောကြားသည်။
မန္တလေး - မြင်းခြံလမ်း ငါန်းဇွန်မြို့အဝင် ၁၄ မိုင်လမ်းဆုံမှ စတင်၍ လမ်းဘေးဝဲယာတွင် သစ်ပင် ၁၅ဝ?
ကန့်ကွက်မှုများကြောင့် တာဝါတိုင်ကြီးများနှင့် နေအိမ်ခေါင်မိုးများပေါ် တိုင်ထောင်ခြင်းအစား
တူရကီသမ္မတ အာဒိုဂန် ဂျာမနီသို့ မလာရောက်မီ ဂျာမန်မြို့ကြီးများတွင် ဆန္ဒပြခဲ့ကြ